Jidadka Caasimadda oo saaka jaran [Xiran] | KEYDMEDIA ENGLISH
Jidadka Caasimadda oo saaka jaran [Xiran]
Waa dhaqan soo jireen ah oo ay jideeyeen dowladihii kala danbeeyay, in shacabka si naxasiis darro ah loo ciqaabo, marka ay caasimadda imaanayaan madax ajaanib ah, iyadoo aan loo aabbe yeeleen juwa jilicsan ee baahiyaha gaarka ah qaba.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xilli ay tahay maalin shaqo, shacabka caasimadda ayaa ku waabariistay, inta badan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho oo xiran saaka, mana jirin wax ogaysiis ah Dowladda iyo maamulka goboblka ka yimid.
Dhamaan gawaarida iyo mootoooyinka ayaan loo oggoleyn in ay waddooyinka isticmaalaan, halka xitaa jidadka qaar loo diidayo shacabka u lugeynya goobahooda ganacsi, goobaha waxbarasho iyo kuwa aadeegyada caafimaad ka raadsanaya isbitaallada.
Wali si buuxda uma cadda sababta ka danbeysa jidadka la jaray, hayeeshee, Keydmedia Online, ayaa fahansan in maalin kadib, oo ku beegan 09/06/2022, uu Muqdisho ka dhacayo caleema-saarka Madaxweyne Xasan Sheekh, kaasoo hadda dooran 23 maalin.
Waxaa jira warar kale oo sheegaya in Madaxweynuhu uu booqanayo qaar ka mid ah, xarumaha Wasaaradaha sida; Gaasaandhigga, sidaas awgeedna loo xiray waddooyinka, dibna loo furi doono, hayeeshee, KON, ma xaqiijin karto in sababru arrinkaas la xariirto.
Waa dhaqan soo jireen ah oo ay jideeyeen dowladihii kala danbeeyay, in shacabka si naxasiis darro ah loo ciqaabo, marka ay caasimadda imaanayaan madax ajaanib ah, waxaana la filayaa in waddooyinku sii xirnaan doonaan Talaadada, Arbacada iyo Khamiista.
Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu nidaamkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ku eedeyn jiray waddooyinka xiran, oo sababay in hooyooyinka waddooyinka ku umulaan, meydadkana garbaha lagu qaado, hayeeshee durba wuxuu qaaday jidkaas.
Dhanka kale, wufuud heer gobol ah oo ka qeyb galeysa caleema-saarka Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo khamiista dhacaya ayaa ku soo qulqulaya Muqdisho, kuwaas oo hor-dhac u ah qaar ka mid ah madaxda dalalka dariska.
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa la xaqiijiyay in ay ka soo qeyb gali doonaan caleema-saarka Madaxweynaha.